‘पासवर्ड’ कसरी चल्ला त ? - Movies Club Nepal
Home NewsKollyhood	‘पासवर्ड’ कसरी चल्ला त ?
by Movie Club Nepal ९ भाद्र २०७६, सोमबार १४:२३ November 22, 2019
९ भाद्र २०७६, सोमबार १४:२३ November 22, 2019
पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीले फिल्म ‘जिस्म २’ बाट बलिउडमा कदम राखेकी थिइन् । यो फिल्ममा उनले दिएको बोल्ड सिनको अझै पनि बलिउडमा चर्चा हुने गर्छ । अभिनयले भन्दा अंग प्रदर्शन गरेर आफूलाई बलिउडमा स्थापित गर्न लागिपरेकी उनी नेपाली फिल्मको पनि हिस्सा बनेकी छन् । घुमघामका लागि बाक्लै नेपाल आउने गरेकी उनले पहिलो पटक नेपाली फिल्ममा काम गरेकी छन् ।
उनी अभिनीत फिल्म हो- ‘पासवर्ड’ । यो फिल्म यही भाद्र २७ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसको ‘आजको शाम’ बोलको आइटम गीतमा उनले ठुम्का लगाएकी छन् । यो गीतमा ठुम्का लगाउन उनलाई निर्माण टिमले नेपाली ३ करोड १७ लाखभन्दा बढी तिरेको बताइएको छ । सन्नीको पारिश्रमिकसहित गीत खिच्न पाँच करोड लागेको निर्माण टिमको दाबी छ । फिल्मसँगै गीत पनि यूकेमा खिचिएको हो ।
यूट्युबमा ४३ लाखभन्दा बढी भ्यूअर्स बटुलिसकेको यो गीतमा सलमान खान, शाहरुख खानलाई नचाइसकेका विष्णुदेभाले कोरियोग्राफी गरेका छन् । अर्जुन पोखरेलले संगीत भरेको उक्त गीतको भिडियोमा नृत्य गर्न सन्नी ७ जनाको टिम लिएर लण्डन पुगेकी थिइन् । उक्त गीतमा उनलाई दुई सयभन्दा बढी डान्सरले साथ दिएका छन् । सन्नीकै कारण अहिले यो फिल्मको बजारमा राम्रो चर्चा छ ।
उनी यस फिल्मको प्रिमियरका लागि पनि नेपाल आउँदैछिन् । सेप्टेम्बर ११ तारिख (भाद्र २५ गते) फिल्मको प्रिमियर र प्रचारमा सघाउन नेपाल आउन लागेको उनले एक भिडियो सन्देशमार्फत् जानकारी गराएकी छन् । फिल्ममा उनको नृत्यसँगै अभिनय पनि रहेको निर्माण टिमको भनाई छ । तर, दुई दिन अगाडि सार्वजनिक ट्रेलरमा उनको संवादसहितको दृश्य समावेश गरिएको छैन ।
सम्राट बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘पासवर्ड’ को अहिले जे जति हाइप निर्माण भएको छ त्यसको कारण सन्नी नै हुन् । उनले अभिनय गरेको पहिलो नेपाली फिल्म कस्तो होला भन्ने उत्सुकता र कौतुहलता दर्शकमा निकै छ । उनको कारणले फिल्मको इनिसियल व्यापार राम्रो हुने विश्वास निर्माण टिमले लिएको छ । तर, पूरै उनकै भरमा पर्नु पनि घातक हुनसक्छ । किनकि, उनी बलिउडमै सफल मानिन्नन् ।
उनको नेपालमा खासै राम्रो क्रेज छैन । यद्यपि, उनको बारेमा अनविज्ञ भने कोही छैनन् । शहरिया युवापुस्ताले उनलाई राम्रोसँग चिन्दछन् । नेपाली गीतमा नृत्य गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनलाई पछ्याउने नेपाली दर्शकहरु पनि निकै बढेका छन् । तर, सवाल यो उठ्छ कि के ती दर्शक फिल्म हेर्न हलसम्म पुग्लान् ? नेपालमा उनको फ्यान फलोइंग प्रमाणित गर्ने मौका पनि हो ‘पासवर्ड’ ।
विशेषगरि एडल्ट फिल्म गर्ने अभिनेत्री सन्नी यो फिल्मको प्रिमियर र प्रचारमा सहभागी हुँदैमा फिल्मले बक्सअफिसमा बम्पर व्यापार गर्नेमा ग्यारेन्टी छैन । भारतीय कलाकारले अभिनय गर्दैमा फिल्म चल्ने भए गएको बैशाखमा प्रदर्शनमा आएको नेपाली फिल्म ‘द म्यान फ्रम काठमाण्डू’ ले हलमा पानी भन्न पाउँदैन थियो । यो फिल्ममा बलिउडदेखि हलिउडसम्मका कलाकारको अभिनय थियो ।
मुर्ती चोरीको कथामा निर्माण भएको फिल्ममा अनुपविक्रम शाही, विक्रम जोशी, बुद्दि तामाङ, रविन्द्र झा, धिरेन शाक्य, छुल्ठिम गुरुङलगायतका नेपाली कलाकारहरुको अभिनय छ । तर, निर्माण टिमले अहिलेसम्म सन्नीको नाम मात्र भजाएर प्रचार-प्रसार गरिरहेको छ । मिडियाको आँखा पनि उनीमाथि नै छ । तर, के उनकै कारणले ‘पासवर्ड’ चल्ला ? यसका लागि भाद्र २७ गतेसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
रातभरी एयरपोर्टमा बस्नु पत्रकारको जागिर हो : पल
१४ माघ २०७५, सोमबार १५:३०
श्रृङ्खला खतिवडालाई भोट गरी यसरी जिताउ ।
५ मंसिर २०७५, बुधबार १४:२३
किसानको वास्तविक समस्या “गोपि” मा
१७ माघ २०७५, बिहीबार १८:३३
समलिंगी महिलाको कथा प्रियंका-सृष्टी
६ श्रावण २०७६, सोमबार ०७:५४
‘ए मेरो हजुर ३’ गीतमा अनमोल र सुहानाको...
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १८:२३
आयुष्मानले आफैंलाई भने ‘चुसेको आँप’
२० असार २०७६, शुक्रबार १९:०२
‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ गीत, (भिडियो)
४ आश्विन २०७५, बिहीबार १०:२८